'Saxaafaddeena' ha isku xishooto! | KEYDMEDIA ONLINE
‘Saxaafaddeena’ ha isku xishooto!
Cabdullaahi Ibrahim — Warbaahinta Soomaalida runti waxaa la dhihi karaa waa Horumarka ugu weyn ee ay Soomaalidu ku talaabsatay Labaatankii Sano ee la soo dhaafay, iyadoo la og yahay daruufaha ay ku nooshahay Soomaalida.
Dhaliilaha hasta guud ahaan Saxaafadda Soomaalidu wey tiro badan yihiin, Waxaana ka mid ah aqoonyari haysata dadka ka shaqeeya Saxaafadda iyo ku dhaqmid la'aanta waxa loo yaqaano Anshaxa Saxaafadda, tusaale ahaan waxaad arkaysaa wariye daadihinayo barnaamij uusanba ka haysan wax fikrad ah ama waxaa laga yaabaa inaad aragto wariye aan lahayn challenges oo su'aalihiisa oo dhan ay yihiin; Sow kulama ahan iyo wax la mid ah.
Midda kale, waxaa laga yaabaa in ay sawiradaasi daawadaan hooyooyinkii iyo xaasaskii xigtada u ahaa dadkii Shalay ku baaba'ay dhacdadaasi xanuunka badan ama ha ahaadeena kuwii weerarka qaaday ama ha ahaadaan kuwii la weeraray, tusaale ahaan haddii ay daawato sawiradaasi hooyadii dhashay wiilashaasi ma kula tahay in ay hurdayso ? Jawaabtu waa Maya
Midda kale, Sow ceeb naguma ahan inaan Caalamku u soo bandhigo Maalin kasta waxuushnimadeena iyo naxariis la'aanteena, tusaale ahaan waxaad arkaysaa mararka qaar dad soo bandhigayo meydad la jiidjiidayo. War intey kaga qoron tahay diinteena iyo dhaqankeena in meyd la jiidjiido ama la soo bandhiyo sawiro laga argagaxo!!
Dhinaca kale, Wax ay Saxaafaddu haysaa waxyaabo badan oo wanaagsan oo ay ugu horeyso ilaalinta luuqadda iyo dhaqanka Soomaaliyeed, Waayo Saxaafad la'aan suutagal ma'ahan in ay korto luuqadda Soomaaliga ah Islamarkaana ay faafto.Waxaa la mid dhaqanka oo uusan Isna faafi Karin Saxaafad la'aan.
Waxa ay sidoo kale Saxaafaddu kaalin weyn ka qaadatay barashada diinta, taasoo ah arin aad iyo aad loogu baahnaa islamarkaana ay ka faa'iideen dad badan oo aan Aniguba ka mid ahay,Waxaana tusaale u soo qaadan karaa Barnaamijka lagu magacaabo Kulanka Shibile ee ka baxa TV-ga Somalichanel iyo Barnaamijka Hidaha iyo Dhaqanka ee ka baxa Idaacadda VOA-da.